#मार्क्सवाद–लेनिनवाद Archives - Left Review Online
क. रमेश गुरागाईँ २०७६ जेठ ३० गते बिहीवार
विद्वान दार्शनिक सुकरातसँग सम्बन्धित एउटा प्रसङ्ग छ । एउटी निकै सुन्दरी युवती हुन्छिन्। युवतीले सुकरातसँग प्रस्ताव राख्छिन्, तपाईं र म विवाह गर्रौँ ता कि हाम्रो सन्तान तपाईंको जस्तो विद्वत्ता र मेरो जस्तो सुन्दरताको गुणले भरिपूर्ण होस् । युवतीको प्रस्ताववारे विचार गर्दै सुकरातले जवाफ फर्काउँछन्, तिम्रो सुन्दरता र मेरो...बाँकी
#क. रमेश गुरागाईँ#कम्युनिस्ट एकता#दार्शनिक सुकरात#मार्क्सवाद–लेनिनवाद